ဟော်လန် Roden နှင့် Colton ဟေး
"Werewolf" အဖြစ်ကိုလည်းလူသိများစီးရီး "ပြို" ၏ပရိသတ်များအကြားဆုံးဆွေးနွေးတင်ပြခေါင်းစဉ်သည်မိမိသရုပ်ဆောင်တွေ, ဟော်လန် Roden နှင့် Colton ဟေးအကြားတစ်ဦးအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနာမည်ကြီးတွေကိုတရားဝင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်းပေမယ့်စပ်စု paparazzi အဆိုပါကောလာဟလအချို့အတည်ပြု, ဗီဒီယိုဖိုင်အရစီမံခန့်ခွဲကြသည်မဟုတ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ပေမယ့်။
"ဟုတ်ကဲ့, ဟော်လန် Roden နှင့် Colton ဟေးတွေ့ရှိခဲ့" - သူတို့ကအကြီးအနူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်အတူပေါ်ပြူလာစီးရီးပွေ့ဖက်၏ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား, လက်ကိုကိုင်ပြီးပရောပရည်, သူ့အခမဲ့အချိန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းလမ်းလျှောက်ရသောပုံမြင်သောသူယုံကြည်မှုနှင့်အတူပြောကြပါတယ်။
သို့သျောလညျးလုဒိမာတင်, ဟော်လန်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားတဲ့အခါ, ထို့နောက်ခဲ့သေးစီမံကိန်း left မထားပါဘူး။ ယခုလူငယ်များနှင့်အင်တာဗျူးတွင်သူတို့ဿုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနားလည်သောသူသူငယ်ချင်းကအရမ်းနီးကပ်အဆွေဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ထို့အပြင်တစ်စုံသူတို့တစ်တွေရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမျှဝေဖော်ပြဘယ်တော့မှသိရသည်။ "သူတို့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မအားဖြင့်ကြုံတွေ့သူတို့အားအလားတူအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အလွန်နွေးထွေးသောခံစားမှုဖျော်ဖြေရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့လက်အားကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုံခြုံစွာပွောနိုငျ ချစ်ကြည်ရေး ငါတို့သည်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မင်မှုရှိကွောငျးဒီတော့? ထပ်တလဲလဲ Rodin Haines နှင့်ရှိသည် - ကျနော်တို့ "ဟုအဆိုပါသတ်မှတ်ချက်အပေါ်ရုံမိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်ပိုပါတယ်။
တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အခြား parameters တွေကိုဟော်လန် Roden
Dylan O 'Brien နှင့်ဟော်လန် Roden
ဟော်လန် Roden နှင့် 2016 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ရည်းစား
ထိုအချိန်က "ဝံပုလွေ" ၏ပရိတ်သတ်များကိုပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဒုတိယအမည်သစ်ကိုရသောဟော်လန် Colton ပေါင်းစပ်ပြီး, Holton ၏ဤ pair တစုံကိုခေါ်ကြောင်းဖော်ပြပိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Colton Lee ကဟေးအကြောင်းကိုတပြင်လုံးကိုအမှန်တရား
မေလ 5, 2016 တွင်မင်းသားတစ်ချိန်က Rodin တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောဒဏ္ဍာရီပပြောကျသှားသိရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့၌သူအသက် 14 နှစ်လိင်တူချစ်သူကြောင်းကိုကမ္ဘာကိုဝန်ခံထွက်လာမယ့်ခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်သူသည်ဤအစောပိုင်းကသတင်းပို့သည်မဟုတ်လော 28 နှစ်အရွယ်မင်းသားထဲမှာအမြဲအတူတူပင်အဖြေဖြစ်ပါသည်: "ငါရုပ်ရှင်ရုံသွားငါ့အိပ်မက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကွောငျးကိုသိနှင့်ငါအချိန်မရောက်မှီအလူတိုင်းအတွက်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်အကြောင်းကိုသိစေနိုင်ဘူးလို့ပဲ။ "
Elton John Donald Trump ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာစကားပြောဖို့ရန်ငြင်းဆန်
ပဲရစ်မှာတစ်ဦးကရင်ခုန်စရာလမ်းလျှောက် - တစ်ဦးအသည်းအသန်နမ်း Kristen Stewart နဲ့ Soko
တရားရုံးက Karruchi Tren ချဉ်းကပ်ဖို့က Chris Brown ကဖို့သံသယအလွဲသုံးစားမှုပိတ်ပင်ထား
Serena Williams ကအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အားကစားအတွက်မညီမျှမှုအခကြေးငွေဆန့်ကျင်
နယူးရုပ်ရှင် Jolie နဲ့ Pitt ပျက်ကွက်ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်
Pamela Anderson ကရုပ်ရှင် feature မှပြန်လာသော
ပဲရစ်မှာနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှု: အဆိုပါဒမြဘောလီးဝုဒ်ကြယ် Mallika Sherawat လုယက်
New York မှာဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာခရစ်ယာန် Siriano ပြသရန် appetizing အက်ရှလေဂရေဟမ်
စိန့် Bart ၏ကျွန်းပေါ်မှာအနားယူသူမ၏ချစ်သူကိုနှင့်အတူရှာရုန်ကျောက်ခေတ်,
Megan Fox ကမက္ကစီကိုအတွက်ဿုံ shaped ဖက်ရှင်ပွဲတော်တွင် AW17 အပေါ်ပရိတ်သတ်တွေ hit
Reese Witherspoon ကလေးများနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူ 41 နှစ်ကမှတ်ချက်ပြု
သန္ဓေသား2ပတ်
နားရွက်နှင့်အတူဦးထုပ် - အားလုံးအခါသမယများအတွက် 80 စတိုင်မော်ဒယ်များ
တစ်ဦး parquet ၏ stack
ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့အလတ်ဆတ် zucchini သိမ်းထားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Hawthorn သီး - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
အော်ပရာက de Monte-Carlo
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 19 ရက်သတ္တပတ် - အဘယ်သူမျှမထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း